Imveliso yefektri, ababoneleli - abavelisi base China iimveliso
Isiseko senkunkuma senkunkuma esitshixwayo, ikhi yokutshixa okanye isakhelo seH njl.
Ukusetyenziswa kwesiseko sejack: Isetyenziswa ngemibhobho yentsimbi kunye nezikafula kwinkqubo yokwakha ukulungelelanisa ukuphakama kwetafile kunye nolwakhiwo lombhobho, ukulinganisa ubunzima bokuxhasa, kunye nokuthwala umthwalo. Isetyenziswa kakhulu kwinkqubo yokwakha ikhonkrithi yokugalela ukwakhiwa. Ngophuhliso olukhawulezileyo lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kunye nokuhamba okunemilinganiselo emithathu kule minyaka idlulileyo, inani lenkxaso yophahla nalo lenze inkqubela phambili ngokukhawuleza. Ukuhlelwa kweejackki zokwakha: 1. Ngokwenxalenye ...
1. Intshayelelo Luowen HDG isakhelo sokukala sikalwe umsebenzi onzima (675 kg's) kwaye ilungele lonke ushishino kubandakanya: Abenzi bezitena, ukudiliza, abachweli, abakhi bamatye, njl njl. bafuna ukuthenga iselfold ngokwabo kwaye bagcine imali. Ubunzima obukhanyayo be-2.Ukukhawuleza ngokukhawuleza ukumisa -Ungafakwa ngumntu omnye -Kwenziwe kwangaphambili! - Zonke zikongela ixesha nemali. 3.Ubakhi ...
I-Kwikstage Scaffolding Umgangatho ngamnye une-500mm spigot kwaye i-'V'-Pressings ikumaziko angama-495mm kwaye inikezela ngeendawo zeLedgers kunye neTransoms. Umgangatho weKwikstage wenziwe kwimigangatho yamazwe aphesheya ngaphakathi kwe-ISO 9002 imeko yokuqinisekisa umgangatho kwaye ukhuseleko lutyikityiwe ngenjongo yokuchonga kunye neenjongo zokuqinisekisa umgangatho. Ukusebenza ngokuLula kunye neNdleko okubandakanya izinto eziphambili ezi-4 kuphela, ngaphandle kwezilinganisi ezikhululekileyo, ukugcinwa, ukuthuthwa kunye nendibano ye-Kwikstage yandiswa ...
1.Introduction Luowen Ring Lock Banikwe uhlobo entsha banikwe, ikakhulu eyenziwe Ring ipleyiti, umgangatho, ileja, izihlangu zezilima, kunye nezincedisi, kwamkelekile kakhulu kwimarike yehlabathi, ngenxa eziluncedo zayo kunye nokusetyenziswa ngokubanzi. 2.Feature isakhiwo 1.Simple: Iindawo eziphambili zibandakanya umgangatho, ileja, kulula ukuba ukudibanisa kwaye ibattery, kwaye kulula kakhulu ukugcina, ukudlulisa nokugcina. 2.Flexible ekumiseni: Kukho imingxunya 8 ipleyiti isangqa, ngoko ke lered kunye brace ukuba ukufaka i ...
1.Introduction: Luowen CupLock Banikwe luhlobo olutsha banikwe, kuyaphandwa, kuyilwa kwaye kuphuhliswa kubhekiswa phambili ubuchwephesha bamanye amazwe ngokudibeneyo kunye nezixhobo, zilungile kumgangatho kunye nokusetyenziswa. 2.Feature: Ulwakhiwo olulula: Amacandelo aphambili abandakanya umgangatho, ileja kunye nesibiyeli, kulula ukuhlangana kunye nokudiliza, kwaye kulula nokugcina, ukudlulisa kunye nokugcina. 2.Safety and Steady: Le indebe phezulu une Screw ukukhuhlana kunye self-womxhuzulane, oko kungaba self-itshixa ngcembe, th ...
I-H20 umqadi wokhuni (i-plywood ye-multilayer yewebhu kunye nentloko yeplastiki) i-Luowen H20 Timber Beam inobunzima bokukhanya, ukuphakama okuphezulu, okugqwesileyo ekungeneni kwamanzi, ubungqina be-asidi, ubungqina be-alkali, ubungqina obulungileyo. Iimpawu: 1, Ubunzima bokuKhanya: uxinano lwe-H20 Beam Beam yi-4.5kg kuphela ngemitha nganye, kulula ukuyihambisa, qhaqha kwaye ufake. 2, High Ukuqina: H20 Timber Beam akukho lula ukuba ahlukane ngenxa ifayibha. 3, Ubungqina obuhle: I-H20 Beam Beam ilungile ekungangeni manzi, ekuvimbeleni i-asidi, i-alkal ...
Intshayelelo yeMveliso I-Luowen 120 yeFreyimu yeSakhelo seFomwork yenziwa ikakhulu ngesakhelo sesinyithi, ipaneli yeplywood, isibiyeli setafile, coupler, waler wembuyekezo, intonga yokubopha, ukuphakamisa i-hookformwork, i-clamp yesinyithi kunye nepropu yokutsala, njl. ngamaplanga ubukhulu zigqunywe ngentsimbi kumngxuma. 2. Isakhelo somelezeke kakhulu, kwaye ifom form yodonga inokuthwala uxinzelelo lwe-lateral 60KN / m2 ngelixa ifom yekholamu inokuthwala i-80 KN / m2. 3. Njengenkqubo emiselweyo, ibhetyebhetye ukudibana, ...
Ukucaciswa 1. Ubunzima: Malunga ne-15KG / Imitha yesikwere 2. Imathiriyeli: I-PP + ifayibha zeglasi + i-Nilon 3.Ubunjani: Iiphaneli, isiphatho 4.Ukuphinda ubuye: ngaphezulu kwamaxesha e-100 5.Eco-friendly: Ewe 6. Iqondo lobushushu lobushushu: Ngaphezulu kwe-150 isidanga seCelsius 7. Hlanganisa kwaye udibanise: Kulula kwaye kuyakhawuleza 8. Isiqinisekiso: Uvavanyo lwe-CNAS 2.Ubungakanani bekholamu: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm ukuphakama kwePaneli: 750mm 3.Izinto ezibonakalayo kunye nolwakhiwo 1.Material: PP + ifayibha zeglasi + iNilon 2. Ulwakhiwo: iiphaneli, iikona, isiphatho kunye nezixhobo 4.Feature 1.Ixesha elide lobude & ...
Iinkcukacha: 1. Ubunzima: Malunga ne-15KG / Imitha yesikwere 2. Izinto: I-PP + iifayibha zeglasi, kunye nezixhobo zeNilon 3.Ubunjani: Iiphaneli, iikona, isiphatho kunye nezixhobo 5.Resued: ngaphezulu kwe-100 amaxesha 6. Iqondo lobushushu lobushushu: Ngaphezulu kwe-150 degree I-Celsius 7. Hlanganisa kwaye udibanise: Kulula kwaye kuyakhawuleza 8. Isiqinisekiso: Ubungakanani bekholamu yovavanyo lwe-CNAS: Ukusuka kwi-200 * 200mm ukuya kwi-600 * 600mm, ubungakanani obungaphezulu kwetshathi engezantsi: Izinto kunye noLwakhiwo 1.Impahla: PP + iifayibha zeglasi 2.Ulwakhiwo: iipaneli Iikona, isibambo kunye nezixhobo
I-Timber Beam Formwork Ifomathi yeflethi yenziwe ngeplanga, umqadi womthi kunye nentsimbi ye-walingng. Lungisa iplywood ngemiqadi yamaplanga ngokucofa izikrufu ukudibanisa umqadi wokhuni kunye nocingo lwentsimbi ngocingo lweflange kulula ukuluhlanganisa, ukuluqhaqha nokulungelelanisa kwisiza. Ikhaphukhaphu ngokobunzima kwaye ilungele ukwakhiwa kunye nokuthuthwa. Ulwakhiwo lunobubele kakhulu kwindalo esingqongileyo. Iplywood isebenza ngokugqibeleleyo. Iplanga linokungena komoya okuhle kunye nokufunxwa kwamanzi, okugqityiweyo ...
Formwork ikholamu square Plastic
Ukwazisa ngemveliso Inkampani yethu iphuhlise imveliso entsha, ipheyinti yeglasi yefibre eyakhiweyo yokwakha, isebenzisa i-polypropylene njengezinto ezisisiseko, iglasi yefayibha eqinise izinto ezihlanganisiweyo, kunye nokuvunda okucinezela kwiimilo. Inkqubo ye-formwork ine-65 formwork formwork esemgangathweni kunye ne-65 aluminium formwork form. Ingasetyenziselwa iindibaniselwano ezahlukeneyo zokumelana nemithwalo eyahlukeneyo yokwakha. Ixabiso eliphantsi kunye nokusebenza okulula zezona zinto ziluncedo kakhulu ze-fiber ende yeglasi ...
Udonga kunye neSlab formwork
IIMPAWU ZE-FORMWORK ZE-ABS: IIPaneli ezilula zokukhanya zikhuselekile, kulula ukuzisebenzisa kwaye zivelisa ngakumbi. Kuyinyani ukuba ukuphakamisa izixhobo ezinzima kubangela ukudinwa kunye nokwenzakala. I-formwork ye-Zhongming yeplastiki inobunzima ngokomndilili we-17 kg / m2 ngaphandle kwento enye enzima kune-13 kg: oku kuthetha ukuba yonke inkqubo inokuhlala isetyenziswa ngesandla, kuyo nayiphi na imeko. Ukusebenza kwe-Crane akusafuneki kwakhona, kunika iisayithi zokwakha ubhetyebhetye obukhulu ngaphandle kokulalanisa kwezempilo nakukhuseleko 2.F ...
Ringlock banikwe Izahlulo, Metal Cuplock banikwe, Isibiyeli seBhendi yokuQinisa, Heavy Duty Ringlock banikwe, Banikwe Screw Adjustable Screw, Izixhobo zeKwikstage Scaffolding,